Puntland oo walaac ka qabta buundo muhiim u ahayd ganacsiga Boosaso iyo gobollada kale oo go?day – Radio Daljir
Nofeembar 12, 2013 4:35 b 0
Garoowe, November 12, 2013 – Roobabka baaxadda leh ee ka da?aya weli deeganada Puntland ayaa sababay in ay go?do buundada wayn ee Midgaran ee ku dhow tuulada Suni-jiif ee ka tirsan gobolka Nugaal.
Hay?ada NESHA ayaa shaacisay in ay wadadu go?day isla markaasna uusan sii soconayn isu-socodka gaadiidka ganacsiga ee ka yimaada Boosaaso iyo weliba kuwa u amba bixi jiray dhanka magaalada Boosaaso ee xaruunta gobolka Bari.
?Daadad xoog leh baa ku soo noqday togga isla markaasna bundada oo ahayd muhiim waa ay go?day,? ayuu yiri agaasimaha hay?ada NESHA Maxamuud Cabdinuur ?Ilaa 200 mitir oo dherer ah, balacana 8 mitir yahay, hoosna 3 mitir tahay biyuhu ayaa faruureen laamigii.? Ayuu yiri Cabdinuur.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole oo maanta booqday Buundada waxaa uu sheegay in khasaaraha ugu daran uu ka jiro buundada oo xalay go?day, waxaa uu sheegay in ay wakhti dheer qaadanayso saamaynta ay buundadu reebtay.
?Gebi ahaan buundadu waa go?day oo biyaha togga maraya ayey raacday.? Ayuu yiri Cabdinuur oo daljir u xaqiijiyey in jidka oo idil uu kala go?ay isla markaasna baabuur badan ay hadda xaniban yihiin.
Madaxweyne Dr. Faroole oo ka hadlay arinta jidkan go?ay, waxaa uu ka dalbaday beesha caalamka in ay soo gurmadaan, ?doorkeena waan gelaynaa hadda waxba hagran mayno, waxaan ka codsanaynaa caalamka in ay arintan wax ka qabtaan.?.
Gurmadyo kala duwan oo loo fidinayey dadka ku dhibataysan dhulka xeebaha ah ayaa socda, jidka go?an waxaa uu saamayn ku reebi doonaa arrintaas sida aan wararka ku helayno, maadama aan jidka laga gudbi karin, Hay?ada NESHA ayaa ku mashquulsan in la helo jid macmal ah oo isu-socodka looga faa?iidaysto.
Dhegeyso: Agaasime Maxamuud Cabdinuur oo u waramay Cabdiraxmaan Axmed oo daljir ka tirsan